Ny fahasamihafana eo amin'ny SharePoint Online sy SharePoint On-premises | NY
Ahoana ny fahasamihafan'ny fizotran-tserasera amin'ny sehatra onjam-peo ao amin'ny Internet
SharePoint Microsoft dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny aterineto eo amin'ny tsena. Izy io dia manolotra hevi-dehibe maromaro mitrandraka ny angon-drakitra sy ny fitantanana, ny fitoraham-blaogy, ny fitantanana vondrona ary ny sasany SharePoint dia singa tokana ho an'ny fizarana angona eo amin'ny mpanjifa samihafa. Toerana tokana ho an'ny fitantanana ny votoatin'ny fikambanana isan-karazany. Ny fikambanana dia afaka manamboatra, manamboatra toerana ary manolotra fanomezan-dàlana ho an'ny olona mifanaraka amin'ny filàna ara-barotra.
Ny voalohany dia Sharepoint On-Premises. Mitaky fitomboana goavam-be ny faminaniana kapitalina mba hananganana fitaovana ara-batana sy handoavana ny sanda eo amin'ny fahefana, mamela sy hanamafy.
Ny safidy hafa dia Sharepoint Online, izay ahitana ny fampisehoana ny fototra manontolo amin'ny rahona, noho izany toe-javatra izany ny mpamatsy Microsoft. Ny Microsoft dia manolotra SharePoint Online sy Office 365 ho safidy cloud-construct amin'ny SharePoint Mifandraika amin'ny lohahevitra. Office 365 dia Software iray ho toy ny Service (SaaS) izay zaraina momba ny informatika.
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny roa dia ny hitazomana ny toerana ao an-trano dia mandefa toerana bebe kokoa sy vondrona IT mba hitazonana ny mpizara, hampidirina indray ny famerenana sy ny famahana azy.
Toy ny raharaham-barotra, ny toerana misy ny fampahalalana momba ny orinasa dia midika zavatra lehibe. Fikambanana vitsivitsy dia tsy mety na tsy afaka mitahiry ny angon-dry zareo ao amin'ny rahona noho ny antony ara-drariny na ny tsy fitoviana, izay ny On-premises no safidy tsara indrindra.
Security / Legal Reasons - Fikambanana tsy dia mampiasa afa-tsy ao amin'ny trano iray noho ny fiarovana na antony ara-drariny. Ny trano fanasitranana dia raharaha mendrika. Raha toa ka ao amin'ny rahona ny raharaham-barotra dia ahafahan'i Microsoft ny data, ary raha misy ny adihevitra ara-drariny dia tsy misy olana ara-pahasalamana eto.
Ny ankamaroan'ny asa aman-draharaha sy ny isan'ireo fandraharahana ara-barotra (Subscriptions E2, E3 ary E4) dia mamela ny fampivoarana ny aterineto amin'ny antontan-taratasin'i Microsoft Office. Ny fifamatorana mifamahofaho mifandraika dia mamantatra hoe iza amin'ny Microsoft Office Web Apps no mifanaraka tsara indrindra.
Fandrosoana mivoatra - Raha manantena ny hanamboatra sy hanamboatra ny fanamafisam-peo maoderina, ny rahona dia manana ny tsy fahombiazany hatramin'ny fanoheranao ny fanaraha-maso. Misy fiaraha-mientana goavana misafidy ny hijanona ao amin'ny trano fonenana noho io antony io ihany.
Ny fieritreretana iray hafa dia ny fiankinan-doha amin'ny alàlan'ny aterineto raha miala tanteraka amin'ny rahona. Raha tsy misy ny aterineto, ny voka-dratsin'ny tsy fananana fahafahana miditra amin'ny data dia mampitebiteby. Toy izany koa, mila miantoka ny lalana izay anananao amin'izao fotoana izao ianao ary manaisotra ny angon-drakitrao dia ampitomboina amin'ny Sharepoint Online, na koa mety hiady ianao mba hahatongavana amin'izany.
Ny adidy amin'ny fanaraha-maso ny fambolena SharePoint dia olana koa. Raha toa ka mamaha ny olana amin'ny Microsoft - na koa fanovana hafa an'ny SharePoint - izay mamaky ny iray amin'ny tranonkalanao dia tsy hanana fomba fijerena ny fisokafana aloha ianao na hitazona fepetra henjana tsy halefa.
Rehefa avy nilaza izany ianao, dia misy ihany koa antony maro tokony handehananao any amin'ny Online: -
OneDrive for Business - Ny iray amin'ireo singa mahomby indrindra ao amin'ny SP Online dia manome hery ny mpanjifa mba hanao tahirin-kevitra ary hampita amin'ny hafa ny heviny, ny fanakianana, ary ny fanampian'ny fahaizana amin'ny antontan-taratasy. OneDrive for Business dia manome ny fikambanana iray toerana hametrahana ny rakitra miasa sy ny angona, ny ekipa ary mizara amin'ny gadget.
Office Apps Apps - Afaka mampiasa fampiharana maro samihafa miaraka amin'ny mpikambana mpikambana ao amin'ny birao 365 ianao mba hampiasana fitaovana maromaro amin'ny Sharepoint. PowerBi amin'ny SharePoint online dia fitaovana tena ilaina. Amin'ny fampiasana Dashboards sy tatitra dia misy fomba tsara kokoa ahafahana mijery sy mampiseho angona. Ny sasany amin'ireo fampiharana ireo dia: - PowerBI, Delve, Flow (famoronana asa fototra), Power Apps (na iza na iza afaka mizara tahiry SharePoint toy ny fampiharana samihafa).
Portable Apps - Ny ankamaroan'ireo fitaovana sy fampiharana voalaza etsy ambony dia azo henoina amin'ny finday, ary noho ny fahaiza-manao mandeha amin'ny synchronisation dia afaka mahazo ny fampahalalana na aiza na aiza amin'ny fotoana maika.
Amin'ny SharePoint Online dia tsy mila manelingelina ireo pataloha SharePoint ianao ary mamelabelatra izay mameno ny 2-taona faran'izay be taona noho ny fikarakaràn'i Microsoft. Eny tokoa, na dia tsy misy ny fanavaozana sy ny fanamafisana aza dia azonao ampiasaina ireo singa vaovao atolotra azy.
Azonao atao ny mijery ny toeram-pambolena eto sy any. Ny fametrahana client iray hafa ao amin'ny Office 365 dia tsotra, fa ny iray monja dia miantso amin'ny Admin Portal mba hahatonga mpanjifa hafa na hanomezany lisansy vaovao.
Amin'ny ankapobeny, miankina aminao amin'ny fametrahana famaranana faratampony raha toa ka SharePoint Online Office 365 na SharePoint On-Premises na Hybrid, mifanaraka amin'izay ilain'ny fikambanana misy anao. Na eo aza ny fandaharam-potoanan'ny SharePoint izay tianao hofidiana dia zava-dehibe ny mampiato ny angon-drakitrao. Amin'ny ankapobeny dia tsotra kokoa ny midina any amin'ny rahona amin'ny fampiasana fandaharana ivelany, izay manamafy ny angona avy amin'ny rahona amin'ny habaka tsotra ary azo atokisana tsy tapaka avy hatrany.
Mba hahafantarana azy Sharepoint, Azonao atao ny mifidy amin'ny làlana iray amin'ny Innovative Technology Solutions. Ny mpandray anjara eto dia mampiseho ny hevitra tsirairay ao anaty fomba fijery iray, mamela ny mpikambana hiasa ho an'ny tanjona sy ny tanjona rehetra amin'izany.
Architectural SharePoint 2016: Inona ny vaovao ho an'ny mpandrindra?